» किरणले रचे नयाँ ईतिहास
किरणले रचे नयाँ ईतिहास
१४ भाद्र २०७७, आईतवार २०:३०
मकवानपुर, १४ भदौ । नेपाल आईडल सिजन ३ मा भर्सटाईल सिंगर र पर्फोमरका रुपमा चिनिएका किरण कुमार भुजेलले फाईनल राउण्डमा तारिफयोग्य प्रस्तुतिहरु दिएका छन् । उनले वाईल्ड कार्ड जित्दै फाईनलमा प्रवेश गरेर आफुलाई आईडलको योग्य सावित गरिदिएका छन् । उनले फाईनल राउण्डमा ‘टुङ्नाको धुनमा’ बोलको गीत गाएर तहल्का मच्चाएका थिए । प्रस्तुतिबाट निर्णायक र दर्शकहरुको प्रशंसा बटुलेका किरण फाईनल राउण्डमा पनि उर्जावान गायकका रुपमा देखिए । उनले सेकेण्ड रनर अप बन्दै नयाँ ईतिहास रचेका छन् । उनले नगद ५ लाख पुरस्कार पाएका छन् । तर उनले पनि प्रतियोगिताका अन्य प्रतियोगीले जस्तै पुरस्कार ग्रहण गर्ने मौका पाएनन् । उनी पनि आईडल टिमसँगै आईशोलेसन जान बाध्य भएका छन् ।
किरणले नेपाल आईडलमा ६ वटा अवार्ड जितेका छन् । उनले ४ वटा अपलिफ्टिङ पर्फोमेन्स अफ द डे’ अवार्ड, एउटा रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड र एउटा ग्लामर मोमेन्ट अफ द डे अवार्ड जितेका छन् । उनले वाईल्ड कार्ड राउण्ड सहित २ पटक सर्वाधिक भोट प्राप्त गरेका थिए ।
अडिसन राउण्डदेखि नै चर्चामा रहेका किरणले स्कुले जिवनदेखि नै गाउन सुरु गरेका हुन् । कक्षा ६ मा अध्ययन गर्दाको समयमा नै उनले गीत गाएको अनुभव छ । दाईले गाएको देखेर दाईकै नक्कल गर्दै गीत गाउन थालेका किरण एसएलसी सकाएपछि वि.सं. २०६५ सालमा काठमाडौँ प्रवेश गरेका थिए । हेर्नुहोस् भिडियो फिचर–
काठमाडौँमा आएर सँगीत विषय अध्ययन गरेका किरणले ललितकला क्याम्पसबाट संगितको औपचारिक शिक्षा लिएका छन् । संगितमा नै स्नातक गरेका किरणले वि.सं. २०६५ सालतिर पहिलो पटक आफ्नै गीत निकालेका थिए । किरण अहिले जे ब्याण्डमा आवद्ध छन् । उनका विभिन्न गीतहरु चर्चामा छन् ।आदरणीय दर्शकविन्द, तपाईलाई किरणको फाईनल प्रस्तुति कस्तो लाग्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।
नेपाल आईडल सिजन ३ मा चर्चा कमाउन सफल प्रतियोगी केविन ग्लान तामाङ यस साता नेपाल आईडलबाट बाहिरिएका छन् । उत्कृष्ट ४ सम्म पुगेका केविनले दर्शक श्रोताको मन जित्दै आईडलमा तहल्का मच्चाएका थिए । यसैबिच आईडलमा आफ्नो अन्तिम प्रस्तुति दिँदै गर्दा पनि केविनले तहल्का मच्चाएका छन् भने बाहिरिने बित्तिकै नयाँ गीतको टिजर पनि सार्वजनिक गरेका छन् । उनले आफ्नो अफिसियल गीत ‘किन’ को टिजर सार्वजनिक गर्दै नेपाल आईडलको यात्रा सकिएसँगै संगीतको आफ्नो यात्रा सुरु भएको बताएका छन् । हेर्नुहोस् भिडियो फिचर–